Ozi nke Nwanyị Nwanyị nke Zaro dere na 26.04.2016 nyere Angela | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ozi nke Nwanyị Nwanyị anyị nke Zaro dere na 26.04.2016 nyere Angela
di Paolo Tescione - Eprel 28, 2016
N’ehihie a, nne ahụ gosipụtara onwe ya dị ka eze nwanyị na nne nke ndị niile.
O yi akwa pink, ya na akwa mkpuchi di n’elu ya nke kpuchikwara isi ya. O nwere otu rosary ogologo n'aka ya na n'okpuru ụkwụ ya nwere ụwa.
Bloodwa jupụtara n'ọbara.
Mama wutere ma anya ya juputara na anya mmiri.
Ka otuto bụrụ Jizọs Kraịst
“Mymụ mm hụrụ n’anya na ndị m hụrụ n’anya, ọbụlagodi taa m nọ n’etiti unu ịnabata ụnụ niile ma debe unu n’ime obi m Onye N’abụcha.
Childrenmụ m, n'ime obi m enwere ohere maka onye ọ bụla, kụọ aka na m ga-ekwe ka ị bata. Abụm nne gị ma eji m oghe aka eche gị niile.
Bụrụ ụmụaka a tọghatara, gbanwee tupu oge agafeela.
Mymụ m, oge dị mkpụmkpụ, ha dị ezigbo nso ma ọ bụrụ na m nọ ebe a ọ bụ n'ihi na achọrọ m ịzọpụta gị.
Mụntakịrị, n’ozi nke ọ bụla, a na m arịọ unu: chegharịa! Bịakwute sacrament, echela ịhụ ihe ịrịba ama na ihe ebube. Ihe ịrịba ama ahụ bụ Ọkpara m Jizọs dị ndụ na eziokwu na Sacrament nke Ngabiga nke Ọlta. Ọ bụ ebe ahụ ka onyinye kachasị ukwuu na-ewere ọnọdụ.
Ọ bụ m bụ onye na-eduga gị na Jizọs.
Childrenmụ m hụrụ n’anya, taa, echela echi: kpebie maka Chukwu ma kwe ka e duru ụbịakwute Ya, ọkpara m m hụrụ n’anya.
Mymụ m, ụwa ugbu a bụ nnukwu ntụpọ nke mmehie ma ụnụ adịghị ekpebiri Chukwu? Hapụ ụdị ihe ọjọọ niile ma nyefee ndụ gị n’aka m, m ga-eduru gị gakwuru Jizọs.
Mgbe ahụ nne kwuru, sị:
Mụntakịrị, a na m arịọ unu ọzọ ka unu na-ekpe ekpere maka myka m hụrụ n'anya na ụmụ m m hụrụ n'anya. Childrenmụntakịrị, ndị ụkọchukwu na-anwa ọnwụnwa nke ukwuu, ha bụ ụmụ nwoke dị ka gị. Na-ekpe ekpere maka ha, na-ekpe ekpere ụmụaka.
Kpee ekpere ka Nzukọ-nsọ ​​nwee ọrụ dị nsọ. Kpee ekpere n'ihi na ndị ụkọchukwu na-enweghị Chọọchị anwụọla! "
Mgbe ahụ nne ahụ kpere ekpere maka onye ọ bụla nọ ma gọzie mmadụ niile.
N’aha nke Nna, Ọkpara na Mmuo Nso. Amen.